Cubot ID206, smartwatch vaovao miaraka amin'i Alexa ary fahaleovan-tena 18 andro latsaky ny 33 euro | Androidsis
Cubot dia nandefa smartwatch vaovao antsoina hoe ID206 ary efa amidy eny amin'ny Cubot Shop. Mba hahatonga ny fitaovana ho marani-tsaina kokoa, ID206 dia miaraka amin'ny asan'ny Alexa control control sy mikrônônô natoraly. Ity fampiasa ity dia mampiavaka an'i Cubot ID206 eo amin'ireo smartwatches maro.
Ilay fiambenana Cubot ID206 misy efijery TFT-LCD 1,7-inch karazana tactile, miaraka amina endriny afovoany vita amin'ny alimo. Soloy ny zorony miolaka amin'ny zana-kazo iray hanatsarana ny tsipika contour amin'ny famantaranandro, mamela azy io ho lamaody sy lamaody kokoa.
1 Alexa ho teboka matanjaka
2 Endri-javatra bebe kokoa an'ny Cubot ID206
3 Fahaleovan-tena lehibe
4 Fandrefesana famantaranandro
Alexa ho teboka matanjaka
Ny teboka lehibe an'ny Cubot ID206 dia ny fampiasana ny fifehezana ny feo Alexa Alexa. Ankehitriny ianao dia afaka mampiasa Alexa hifehy ny tranonao marani-tsaina amin'ny baikon'ny feo, na hanamarina ny fotoana, hifehezana mozika ary hanao zavatra maro hafa amin'ny baiko, nefa tsy mila manoratra na inona na inona.
Alexa amin'ny ID206 dia hiasa amin'ny fomba mahatoky, manan-danja tokoa mba hahafahana mampiasa ny smartwatch amin'ny alàlan'ny baikon'ny feo ary tsy mila manery eo amin'ny efijery. Amazon's Alexa dia nandroso AI, manome asa tsara raha ny amin'ny fampiasana ny famantaranandro Cubot.
Endri-javatra bebe kokoa an'ny Cubot ID206
Ny fiambenana ID206 dia manampy maody fanatanjahan-tena 14, na any ivelany na ao an-trano dia manohy mamantatra ny fihetsiky ny vatana, manara-maso ny tahan'ny fo ary mandrefy kaloria may. Ny famantaranandro marani-tsaina dia manampy ny famonoana rano matihanina hatramin'ny 50 metatra ho an'ny mpampiasa isan'andro na ny hetsiky ny rano madiodio, ampiasao izany eny amoron-dranomasina, pisinina ary amin'ny toerana hafa.
Cubot ID206 dia misy fiasa marobe izay mifantoka amin'ny fahasalaman'ny mpampiasa. Ny data momba ny fahasalamana dia azo arahi-maso feno amin'ny fanomezana fanaraha-maso ny tahan'ny fo 24 ora, fanaraha-maso oksizenina amin'ny rà, fanaraha-maso torimaso, fanaraha-maso ny adin-tsaina, sns.
Ny famantaranandro koa dia misy fampahatsiahivana vitsivitsy, izay misy ny mipetrapetraka, fampahatsiahivana hisotro rano ary fampahatsiahivana momba ny fotoana hamindra. Ireo dia mitovy amin'ny maody, saingy safidy feno io raha toa ka voalamina hatramin'ny voalohany izy, raha vao manomboka ny smartwatch.
Ilay famantaranandro Cubot vaovao dia manana fizakantenan-tena tsara noho ny bateria, ny ID206 dia miaraka amin'ny bateria 300 mAh, izay mahatratra 18 andro amin'ny fampiasana mahazatra ary 55 andro amin'ny fomba fiambenana mahazatra. Izy io dia iray amin'ireo lafiny ifotony, ny fahaizana manana bateria haharitra efa ho telo herinandro tsy misy enta-mavesatra teo aloha.
Ny faniriana hampiasa ny famantaranandro amin'ny fomba fototra, tsara kokoa ny mametraka ny maody mahazatra fa tsy mampiasa ireo safidy samihafa ananan'i Cubot ID206. Ny famantaranandro amin'ny alàlan'ny famolavolana dia nantsoina ho safidy tena mahaliana ary sarobidy tokoa amin'ireo mpampiasa, izay mahita ny fizakan-tena ho iray amin'ireo zavatra fototra.
Ho fanampin'izany, maro ny fiasa toy ny fanaraha-maso mozika, fampandrenesana antso sy hafatra, ary tarehy miambina mihoatra ny 50 ao anaty rahona hahafahana manova azy sy mampifangaro azy amin'ny fombanao rehetra. Ny fanovana dia mora toy ny mandeha any amin'ny toerana misy anao, safidio ny sehatra vaovao ary ekeo ny hamonjy ireo fanovana.
Ny Cubot ID206 vaovao dia misy refy izay 40mm 12mm ny hateviny, raha 20mm kosa ny tadin-tsoavaly. Ny lanjan'ny famantaranandro dia ambany tokoa, safidy tsara tarehy rehefa atambatra amin'ny akanjo ary entina amin'ireo hetsika manan-danja indrindra nefa tsy mifandona.
Miaraka amina endrika izay mampahatsiahy an'ireo akanjo azo ampiasaina ankehitriny, Cubot ID206 dia mikendry ny hanao dingana lehibe, manolotra ny ankamaroan'ny fiasa mahazatra amin'ny vidin'ny fifaninanana. Hanara-maso ny famantaranandro marani-tsaina rehetra eo amin'ny tanana, maka toerana kely, toy ny hoe famantaranandro mahazatra io.
Cubot ID206 Hita amin'ny loko mainty sy mavokely, ary amidy hatrany Fivarotana Cubot miaraka amin'ny vidiny manomboka amin'ny $ 54,99. Na izany aza, ny mpividy 400 voalohany dia afaka mahazo azy io vidiny fihenam-bidy lehibe 32,99 euro. Ampidiro ny kaody "DEALID206" amin'ny checkout hampihena ny vidiny. Raha tianao izany dia aza misalasala mividy azy izao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Cubot ID206, smartwatch vaovao miaraka amin'i Alexa ary fahaleovan-tena 18 andro latsaky ny 33 euro
Inona ny bloatware ary ahoana ny fanesorana azy amin'ny Android